युवा ज्योतिषी हरिहर अधिकारीले फेरी अचम्मैको भविश्यवाणी गरे, जहाँ शनि र मंगल जुध्छ, त्यहाँ सामूहिक मृत्यु हुन्छ - सुदूरखबर डटकम
युवा ज्योतिषी हरिहर अधिकारीले फेरी अचम्मैको भविश्यवाणी गरे, जहाँ शनि र मंगल जुध्छ, त्यहाँ सामूहिक मृत्यु हुन्छ
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder March, 02 2019
ज्योतिष हरिहर अधिकारी जम्मा २५ वर्ष पुगे, तर उनको ख्याति कुनै सेलिब्रेटीभन्दा कम छैन । फ्यान फलोइङ हेर्दा उनी प्राचीन ज्योतिष विधामा छन् भनेर पत्याउन मुस्किल पर्छ । नेपाल ज्योतिष परिषद्का प्रचार–प्रसार सचिव एवं दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघका प्रवक्ता अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दर्जनौं पुरस्कार पाइसकेका छन् । उनी श्रीलंकामा सम्पन्न १५ औं एसियन कन्फ्रेन्स अन नेसनल हेरिटेजमा उत्कृष्ट एस्ट्रोलाइजर अफ नेपाल घोषित भएका थिए । त्यसैगरी कोलकतामा भएको ज्योतिष कार्यक्रममा उनलाई ३९ औं भारत भूषण एवार्ड प्रदान गरिएको थियो । बंगलादेशमा आयोजित विश्व स्ट्रोलाइजर सोसाइटीले उनलाई ज्योतिष रत्न एवार्ड प्रदान गर्‍यो । उनले दिल्लीमा ज्योतिष विशारद एवार्ड तथा ज्योतिष म्यान अफ दि इयर सम्मान पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । मरिसस, मलेसिया, सिंगापुर तथा थाइल्यान्डमा पनि उनले ज्योतिषसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । प्रत्येक दिन कान्तिपुर टेलिभिजनमा ज्योतिषीसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने हरिहरले ज्योतिषमा विभिन्न अनुसन्धान पनि गरेका छन् ।
५ वर्षभित्र दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनु तपाईंको उमेरका मानिसका लागि अलि अमिल्दो कुरा हो । तपाईंभन्दा जान्ने अरू ज्योतिष दक्षिण एसियामा छैनन् ?
मिस नेपालमा सहभागी हुने सुन्दरीहरूभन्दा धेरै सुन्दर युवती बाहिर हुन सक्छन् । तैपनि जसले मिस नेपाल हुने चाहना राखेर निवेदन दिन्छन्, उनीहरूबीचबाटै मिस नेपाल छानिन्छ । उनीहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छन् । मेरो अवस्था पनि ठीक त्यस्तै छ । मैले ज्योतिषहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा भाग लिइरहेको हुन्छु, कार्यपत्र प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छु । विज्ञानमा स्नातक गरेको तथा अंग्रेजी भाषामा दख्खल भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ज्योतिषलाई आधुनिक विज्ञानको कसीमा राखेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्छु । सबै कुराको विज्ञानसम्मत तर्क गर्छु । सम्भवत: यही कारणले म जुन मञ्चहरूमा भाग लिन पुग्छु, त्यहाँ पुरस्कृतसमेत भैरहेको छु । नेपालमा पनि म अनुसन्धानकै आधारमा अघि बढेको हुँ ।
के–के अनुसन्धान गर्नुभयो ?
ज्योतिष विज्ञानमा शनि ग्रह राजाको स्थान र मंगल ग्रह मन्त्रीको स्थानमा बसेका बेला जन्मिएको मानिस, जागिर (त्यो अवस्थामा जागिर सुरु भएको) वा कुनै पनि देश (स्वतन्त्र) वा देशका अङ्गहरूको निर्माण भएको छ भने ती संस्थाहरू क्षतिग्रस्त हुने कुरा लेखिएको छ । २०५९ सालमा थानकोटको प्रहरीचौकीमा माओवादीले आक्रमण गरेर १३ जना प्रहरी मारेका थिए भने उक्त घटनामा एक जना प्रहरी घाइते भए । मैले यसरी अकालमै ज्यान गुमाएका १३ तथा घाइते भएका एक जनाको कुण्डली अध्ययन गरेँ ।
एक वर्ष लगाएर गरिएको उक्त अध्ययनमा मारिने १३ जनाको जागिर सुरु हुँदा उनीहरूमा शनि ग्रह राजाको स्थानमा बसेको थियो भने मंगल मन्त्रीको स्थानमा थियो । फरक–फरक उमेर तथा फरक–फरक समयमा जागिर सुरु गरेका उनीहरूमा यो अनौठो संयोग जोडिएको देखियो, तर जो घाइते हुनुभयो उहाँको ग्रह स्थिति त्यस्तो थिएन । मैले यो अनुसन्धान गरेपछि नै वास्तवमा जीवनमा ज्योतिष नै हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको हुँ । म विज्ञानको विद्यार्थी अचानक यसतर्फ तानिएँ । त्यसपछि मांगलिक भएका महिला वा पुरुषहरू किन दुईवटा विवाह गर्न पुग्छन् भन्ने कुरा पनि अध्ययन गरेँ भने चन्द्रमा दाहिने भएका बेला राहुचल्दा मानिस अचानक धनी हुने वा सन्तान प्राप्त गर्ने वा ठूलो दुर्घटनामा पर्ने किन हुन्छ भनेर अध्ययन गरे ।
वर्ष २०७२ नेपालका लागि साह्रै प्रत्युत्पादक वर्ष रह््यो । त्यसको कारण के थियो ?
माथि मैले राजाको स्थानमा शनि र मन्त्रीको स्थानमा मंगल बसेको चर्चा गरेँ । तपाईंले गत वर्षको पात्रो हेर्नुभयो भने पात्रोको बाहिरी खोलमै राजाको स्थानमा शनि र मन्त्रीको स्थानमा मंगल लेखिएको पाउनुहुनेछ । त्योवर्षको सुरुमै ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने संकेत थियो । ज्योतिष विद्या पढेका सबैले त्यसको आँकलन गरेका थिए, तर कसरी धेरै मानिसको एकसाथ मृत्यु हुन्छ भन्ने चाहिँ यकिन थिएन । मलाई भने भित्री मनमा कतै भूकम्प त जाँदैन भन्ने लागिरहेको थियो । त्यो किनभने मंगलले भूमिलाई संकेत गर्छ । विशेषगरी पूर्णिमाको रात समुद्रमा छाल बढ्छ । समुद्रमुनि भूकम्प गएपछि सुनामी आउने हो । यसको अर्थ के हो भने पूर्ण चन्द्रका बेला त्यसले जमिनभित्रको पानीलाई आकर्षित गर्छ । त्यसले जमिनमुनिको प्लेटलाई पनि प्रभावित गर्छ । हुन त यो मेरो तर्क हो । हाम्रो समूहले अघिल्लो वर्षको पात्रो निर्माण गर्दै जाँदा मेरो मनमा यस्तै कुरा खेलेको थियो । नभन्दै वर्षको सुरुमै भूकम्प गयो । त्यसले मेरो तर्कलाई बल पुर्‍यायो । यद्यपि भूकम्पले जति क्षति गर्नुपथ्र्याे, त्यो गरेन । किनभने जुन समयमा भूकम्प आयो, त्यो भूकम्प गएको समयमा कर्कट राशि चलिरहेको थियो, अर्थात् भूकम्प कर्कट राशिको थियो ।
कुरा अलि स्पष्ट भएन, बुझ्ने गरी भन्नुस्न ।
कुरा के भने कुनै पनि कुरा कुन समयमा जन्मियो, त्यसको आफ्नै भाग्य र विधान हुन्छ । हरेक जन्मने वस्तुले आफ्नो राशि (दशा–ग्रह) बोकेर आएको हुन्छ । भाग्यवश के भयो भने ११ बजेर ५६ मिनेटमा जन्मिएको भूकम्पको राशि कर्कट थियो । कर्कटको चाल टेडो हुन्छ र यसले विस्तारै क्षति गर्छ । वैज्ञानिक अध्ययनले पनि वैशाख १२ गतेको भूकम्प तलमाथि भएर गएको थियो भन्ने देखाएको छ । अर्को कुरा, कर्कट राशिमा जन्मिएको कुनै पनि वस्तुले एकैपटकमा हानि गर्दैन, पटक–पटक फरक–फरक तरिकाले हानि गर्छ । नभन्दै राशिअनुसार नै वैशाख २९ मा पनि भूकम्प गयो र फेरि क्षति गरायो । पटक–पटक भूकम्प जान्छ भनेर केही ज्योतिषले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, त्यसको कारण पनि त्यही थियो । जुन–जुन समयमा शनि र मंगल जुधे, त्यही–त्यही बेला भूकम्प जाने भविष्यवाणी केही ज्योतिषले गर्नुभएपछि आतंकको अवस्था पनि आयो । यद्यपि उहाँहरू पूर्ण रूपमा गलत हुनुहुन्नथ्यो ।
विज्ञानले बताउन नसक्ने कुरा ज्योतिषले मिलाउँछ भन्नु अलि बढी भएन ?
ज्योतिष पनि विज्ञान नै हो । यो फरक खालको विज्ञान हो र निकै ठूलो विज्ञान हो । म विज्ञानको विद्यार्थी पनि भएका कारण आधुनिक विज्ञान पनि बुझ्छु । वास्तवमा विज्ञानमा अहिलेसम्म जति खोज अनुसन्धान भएको छ, त्यो सुरुवात मात्र हो । आधुनिक विज्ञानबाट धेरै कुरा बाहिर आउन बाँकी नै छ । आधुनिक विज्ञानको सुरुवात भएको धेरै भएको छैन, तर ज्योतिष विज्ञान हजारौं वर्षदेखि क्रियाशील छ । यसको आफ्नै मापन विधि छ । गलत के भयो भने यसलाई धर्मकै एउटा अंगका रूपमा मानियो । धार्मिक व्यक्तिहरू नै पैसाको लोभमा ज्योतिषी पनि भए । जबकि धर्म र ज्योतिषबीच कुनै साइनो छैन । आधुनिक समयअनुसार यसको अध्ययन अनुसन्धान नभएपछि यसमा विकृति पनि भित्रिए । अन्यथा यो राम्रो विज्ञान हो र यसले धेरै कुराको भविष्य र वर्तमानका गाँठा फुकाउँछ अनि मानिसलाई सरल जीवन बाँच्न मद्दत गर्छ ।
हामीले नाकाबन्दीजस्तो त्रासद् कुरा पनि व्योहोर्‍यौं, यसको अध्ययन पनि ज्योतिष विज्ञानले गर्न सक्छ ?
अवश्य सक्छ । हाम्रो देश जुन भूखण्डमा अवस्थित छ, यसको आफ्नै पात्रो बन्छ । जसरी मानिसको चिना हेरेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध हेर्न मिल्छ, देशको पनि मिल्छ । जुन मान्छेको ग्रहमा शनि र मंगल जुधेको छ, छिमेकीहरूबाट विभिन्न समस्या आउँछन्, विशेष गरी भूमिसम्बन्धी समस्या पर्न सक्छ । हाम्रो देशले पनि त्यस्तै समस्या भोगेको हो । अझ कर्कट राशिको भूकम्प गएपछि सहयोगको बहानामा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू देशभित्र छिर्ने, सहयोग हुने तर त्यसले अरू समस्या निम्त्याउने देखाएको छ । भूकम्पपछि संविधान बन्ने वातावरण बन्नु र संविधानकै निहुँमा छिमेकी रिसाउनु पनि शनि र मंगलकै प्रभाव हो ।
भनेपछि ज्योतिषशास्त्रअनुसार अघिल्लो वर्ष देशको दिनदशा ठीक थिएन ?
बिल्कुलै । मेरो विचारमा देशलाई जुन स्तरको दशा लागेको थियो, त्यो आधारमा क्षति र दु:ख कम हो । शनिको दशाका कारण शिवजीले पनि ओढारमा बस्नुपरेको कथा पढ्न पाइन्छ । मान्छेलाई शनिको दशा लागेको कथा पढ्नुभएकै होला । अघिल्लो वर्ष हाम्रो देशलाई त्यस्तै दशा लागेको हो ।
त्यसो भए वर्ष २०७३ सालको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ त ?
पात्रोको पहिलो कभर हेर्दा नै २०७३ साल कस्तो हुन्छ आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पात्रोको कभरमा यसपटक राजाको स्थानमा शुक्र बसेको छ भने मन्त्रीको स्थानमा बुध बसेको छ । जुन व्यक्तिको केन्द्रमा शुक्र छ, ऊ कला, खेलकुद, शिक्षा र प्रविधिमा बलियो हुन्छ । देशमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । यो वर्ष नेपाली साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा तथा प्रविधि निकै अघि बढ्ने देखिन्छ । २०७३ मा धेरै चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न सक्छन् । धेरै साहित्य लेखिन तथा त्यसको चर्चा हुन सक्छ । संगीत र कलाको राम्रो विकास हुनेछ । शुक्रले राजनीतिलाई पनि संकेत गर्छ । यसको अर्थ सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । रमाइलो कुरा, यो वर्ष बुधले मन्त्रीको स्थान लिएको छ । बुध ग्रह तरकारीमा आलु र पानीजस्तै हुन्छ । जसरी जुनसुकै तरकारीमा आलु मिसाउन सकिन्छ, शुक्र जे कुरामा अघि बढ्यो, त्यसलाई बुधले साथ दिन्छ । हामी बुधलाई पानी ग्रह पनि भन्छौं । पानीमा जुन स्वाद मिसायो, पानी त्यही स्वादको हुन्छ । उसले आफ्नो स्वाद बिर्सन्छ । यसपटक देशमा जुन कुरा अघि बढ्छ, बुधले त्यसैलाई साथ दिन्छ । मेरो विचारमा यो वर्ष व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ । लेखक, संगीतकार तथा कलाकारहरूले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नुपर्छ ।
के वर्षभरि नै यस्तै अनुकूल स्थिति रहन्छ ?
हुँदैन । वैशाख १९ देखि असार २४ सम्म शुक्र अस्त हुन्छ । त्यतिबेला देशका सबै क्षेत्रको अवस्था सामान्य हुन्छ । भदौ २५ देखि असोज २० गतेसम्म बृहस्पति अस्त हुन्छ । त्यतिबेला गलत विचार भएका नेताले गाइड गरे भने जनता त्यतैतिर लाग्न सक्छन् । यस्तो समयमा गलत राजनीतिक विचारको उदय हुनसक्छ । यसले सत्ता परिवर्तन पनि गर्न सक्छ । असोज २१ गतेपछि भने देशमा सबै किसिमका व्यवसायले गति लिन थाल्छ । यो बेला देशमा नयाँ नीतिहरू सार्वजनिक हुनसक्छन् । उक्त नीतिलाई राम्रोसँग लागू गर्न सके देश अगाडि जान सक्ने देखिन्छ ।
देशले बेहोर्नुपर्ने कुनै ठूलो दुर्घटना, नाकाबन्दी वा सामूहिक मृत्युको कुनै योग छ कि ?
सानातिना समस्या त आइहाल्छन् । किनभने प्रत्येक दिनको भिन्दाभिन्दै योग हुन्छ, तर ठूला दुर्घटना, सामूहिक मृत्यु, महामारीजस्ता ठूला दुर्घटना हुने देखिँदैन । बरु पुराना प्रशिद्ध व्यक्तिहरू फेरि शक्तिमा पुग्ने अवस्था भने आउन सक्छ ।
नेपालीहरू भाग्यमा विश्वास राख्छन्, त्यसैले ज्योतिषीहरूको व्यापार मौलाएको छ । यसमा ठगी हुने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
धेरै हुन्छ । मान्छेलाई सबैभन्दा सजिलो गरी ठग्न सकिने पेसा ज्योतिष एवं धार्मिक क्रियाकलाप नै हुन् । ज्योतिष ठूलो विज्ञान हो । यसको अध्ययन गर्ने मानिस अध्येता हुनैपर्छ । बाटोमा बसेर हात हेर्ने वा दुई–चार महिना ज्योतिष अध्ययन गरेकाहरूबाट जान–अनजानमा गलत कार्य भैरहेको हुनसक्छ । ज्योतिष विद्या सबैले जान्नुपर्ने कुरा हो, तर आफ्नो भविष्य अरूको हातमा छ भनेर विश्वास गर्नु हुँदैन । ज्योतिषले केही कुरा संकेत गर्छ, सबै भविष्य बताउन सक्दैन ।